Wararka Maanta: Jimco, Oct 16, 2020-Weerar khasaaro geystay oo ka dhacay inta u dhaxeysa magaaloyinka Buula Burte iyo Jalalaqsi
Weerarka ayaa yimid kadib markii dhaqdhaqaaqa Al-shabaab ay qarax la beeg sadeen kolanyo ciidamo ka tirsan militiriga Soomaaliya qeybta 27-aad oo kasoo baxay degmada Buula burte ee gobolka Hiiraan.
Warar kusoo dhacay warqabadka Shabakadda HOL ayaa sheegaya in weerarkaasi ay ku dhinteen 4 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya halka tira kale oo ku dhaawacantayna la geeyay degmada Buula burte.
Saraakiisha ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa dhankooda sheegay iney dileen xubno ka tirsan Al-shabaabkii weerarka kusoo qaaday ayna iska difaaceen.
Ciidamadan wadada loo galay maanta ayaa la sheegay iney u jeedkoodu ahaa xaqiijinta howlgalo ay ku sugayaan amaanka wadada xariirisa magaalooyinka Jalalaqsi iyo Buula burte.
Dhaqdhaqaaqa Al-shabaab ayaa inta badan la beegsada ciidamada dowladda weeraro gaadmo ah iyo kuwa fool ka fool ah.